जापानको मासिक २ लाख कमाउने जागिर छाडेर,स्वेदशमा सैलुन पसलमा रमाउँदै राना मगर ! – Yuwa Aawaj
जापानको मासिक २ लाख कमाउने जागिर छाडेर,स्वेदशमा सैलुन पसलमा रमाउँदै राना मगर !
माघ २०, २०७७ मंगलबार 304
पोखरा : कपाल वा दाह्री काट्ने सैलुन पसल भनेपछि हामी सजिलै भारतिय मुलका वा मधेसीले सञ्चालन गरेको भनेर हामीले सजिलै बुझ्ने गछौ ।
हुन पनि नेपालका अधिकांश सैलुन पसलहरु भारतिय मुलका वा मधेसी समुदायका मानिसहरुबाट सञ्चालन भएको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौ । पोखरामा अझैपनि प्राय सैलुन पसलहरु भारतिय मुलका नाइहरुबाटै सञ्चालित छन ।
तर पछिल्लो समय नेपाली युवाहरुले पनि नाइको सीप अंगालेर मनग्ये रुपमा नेपालमै आफ्ना दाजुभाइहरुको कपाल काटेरै मनग्य आम्दानी गर्दै आइरहेका छन ।
पछिल्लो समय नेपाली युवाहरुले हेण्डसम पार्लर देखी बार्वर सप खोलेर आफ्नै भुमिमा मनग्य आम्दानी गर्दै आइरहेका हुन । यसैमध्ये एक युवा हुन बाग्लुङका शुसिल राना मगर ।
शुसिललाई नपुग्दो केही छैन, बाग्लुङ पुरानो गाउ भइ पोखरामै हुर्केका शुसिललाई बार्बर बन्छु भन्ने कहिल्यै पनि सोच थिएन । सानैदेखी पोखरामा हुर्केर पोखरामानै पढेका शुसिल बैदेशिक रोजगारमा पुगेर हण्डर खाएपछि बार्बर बन्ने सोच पलाएको हो ।
लामो समयदेखी जापनमा रहेका बुवा चन्द्र बहादुर राना, आमा दिल कुमारी रानाका एक्लो छोरो शुसिल एसएलसि उतीर्ण हुनासाथ प्लस टु अध्ययन गर्दै गर्दा २०६७ सालतिर जापान पुगे ।
जापान बसाई उनको धेरै समय टिकेन । जापानमा पुगेर शुसिलले ९ महिनामात्र जापान बस्ने मौका पाए । जापानको मेहनतले शुसिलले मनग्ये आम्दानी गर्थे तर जापान सरकारको नियम भन्दा बढी समय काम गर्न थालेपछि शुसिललाई त्यहांको सरकारले जापानबाट नेपाल फिर्ता गर्यो ।
जापानमा मेहनत गर्न सिकेका शुसिलले हिम्मत हारेनन । नेपाल आएर जापानमा जस्तो मेहनत गर्ने होभने नेपालमानै मनग्य आम्दानी त्योपनि साथीभाइहरु संगै बसेर कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने उनमा आंट र भरोसा थियो ।
सीप र मेहनत हुने हो भने नेपालमै बसेर केही गर्न सकिने भन्दै हिड्ने शुसिल पोखराको भाटभटेनी सुपरमार्केटको अण्डरग्राउण्डमा नेपाली युवाहरुले जी एच हेयर सैलुन खोलेको थाहा पाए ।
उनी प्राय जसो ग्राहकको रुपमा नेपाली युवा हिमाल लिम्बुले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त सैलुनमा जाने क्रम वढ्न थाल्यो । ग्राहक बनेर पुग्ने शुसिल अन्तत उक्त बार्वर सपमा भोलेन्टिएरको रुपमा काम सिक्नेगरी काम शुरु गर्न थाले ।
सोही समयमा उनले उत्तम गुरुङलाई समेत भेट्ने मौका जुर्यो । उत्तम पनि उक्त सैलुनमा कपाल काट्ने काम गर्थे । सो सैलुनमा दुइवर्ष कपाल काट्ने काम गरेका शुसिल र उत्तम मिलेर पोखराको अमरसिंह मिनी मार्केटमा ८ लाखको लगानीमा दुइ वर्ष अगाडि बार्वर सप सञ्चालनमा ल्याए । मिठो बोलीचाली नम्र ब्यवहार भएका शुसिल र उत्तमको वार्वर सपको ग्राहकपनि भाटभटेमै आउनेहरु हुन थाले ।
पसल सञ्चालनका लागी आफ्नै साथी पालिखेचोकका बिनायक पालिखे र शुसिलका काका सिंगापुरमा रहेका गणेश राना मगरले बार्वरमा प्रयोग हुने औजारहरु समेत सहयोग गरेको शुसिल सम्झन्छन ।
सुरुमा पसल सञ्चालन गर्दा कोही पनि ग्राहक नहुनेहोकी लगानी डुब्ने पो होकी भन्ने चिन्ता पनि थियो । तर भाटभटेनीकै आफ्नो पुरानो ग्राहकबाटै आफुहरु आज सम्मको यात्रामा आइपुगेको शुसिल बताउछन ।
वार्वर सप सञ्चालनको सुरुको दिनमा दैनिक १५ देखी २० जना ग्राहक आउने गरेको र हाल दैनिक ५० जना ग्राहकहरु आउने र मासिक २ लाख कमाइ हुने गरेको छ । वारवरबाटै कमाएको केही पैसा सामाजिक काममा समेत उनीहरुले खर्चिदै आइरहेका छन ।
उनीहरुले वर्षेनी थोरै भएपनि रकम छुट्याएर वृद्धाश्रमहरुमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन । राना र गुरुङले वार्वरमा कपाल काट्ने मात्र हैन वार्वर समेत सिकाउदै आएका छन हाल ४ जनाले वार्वर सिकिरहेको उनीहरुले वताए ।
उनीहरुकै उत्पादक सुदिप गुरुङ कान्छा अहिले वार्वरमा पोख्त भइसकेका छन । शुसिल भन्छन नेपालमै केही गर्छु भन्ने जोश जांगर झनै पलाएको छ तरपनि नेपाली युवाहरु विदेशीने फेसन नै बनेको छ।
नेपाली युवाहरु विदेश जानु नराम्रो होइन तरपनि सिप सिप सिकेर जानु राम्रो हो र वैदेशिक रोजगारमा सिकेको सिपलाई नेपालमानै प्रयोग गर्न सके झनै राम्रो ।
Prevमन्त्री अर्याल भन्नुहुन्छ : निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ, ढुक्क हुनुस् ।
Nextयिनै हुन् नेपालकी एक मात्र हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने महिला उद्धार पाइलट…हेर्नुहोस् ।
गगन थापा भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी साथ दिन तयार छौँ, कृपया अहंकार र अकर्मण्यताको धरहराबाट ओर्लनुस् ।